Dictionnaire malgache et encyclopédie de Madagascar : andrianjafitrimoedouard
Entrée Andrianjafitrimo Edouard
Définition malgache Andrianjafitrimo Edouard (1881-1951) ( Stella, Z Volondanitra, Emma Rasoaseheno, Ny Ela) [3.1]
Ny zokiny indrindra tamin’ny mpanoratra malagasy mbola velona ankehitriny no ho resahina eto. Teraka tamin’ny 28 Mai 1891 tao amin’ny tranon’ny printsesy Raketaka, renin’ny Mpanjakavavy Ranavalona III tao Andohan’ny andohalo Antananarivo izy. Zanaky lahitokan’ ny andriana Rasahenolahy, lehiben’ny Zazamarolahy tamin’ny fanjakan’andriana sady mpitsara malaza tamin’ny tany fahagasy izy, ary ny reniny dia ny andriambavy Rasoanjanahary, zanakandriana – zazamarolahy avy eny Ambalanirany Iharamy. Avy amin’ny lafin-drainy: ny raibeny dia Andriatsaba Andriamahenina, zazamarolahy avy ao Imahazaza, Taranaka faha-5 avy amin’ny Mpanjaka Andriambelomasina izy avy amin’ny zanany faralahiny: Andriatsimitovizafinitrimo. Avy amin’io raibeny io no nangalana ny anarany. Ny renibeny kosa dia taranaky ny Mpanjaka Andrianampoinimerina tamin’ny vadiny Rabodo. Avy amin’ny lafin-dreniny: ny raibeny dia Andriatomponimerina, zazamarolahy avy ao Ambalanirana. Taranaka faha-6 avy amin’ny Mpanjaka Andriambelomasina izy. Ny renibeny kosa indray dia Rakaloanosy avy eny Anosindrakaloanosy Iharamy, izay zanaka vavin’ny Andriamaheritsialaintany, rahalahin’ny Mpanjaka Andrianampoinimerina. Niaina tao anaty ny fe-potoana telo teo amin’ny literatiora malagasy izy dia: ny firoboroboana hatreo amin’ny taona 1915, ny andro sarotra nandriatra ny 7 taona ary ny masoandro nipoaka indray tamin’ny taona 1922 ka mandra-pahatonga ny rebi-kondry ankehitriny. Anarana isehoanay eo amin’ny soratra ny hoe: Z Volondanitra, ny Emma Rasoaseheno, Ny Ela, ary ny sonia isehoany matetika dia Stella, ary tsy iza izany fa E. Andrianjafitrimo. Kely foana sisa tsy ho feno 90 taona ity mpanoratra ity nefa afa tsy ny masony efa pahina dia mbola matselaka sy mahatadidy zavatra be dia be ny sainy. Hany ka mahafinaritra ery ny midinidinika aminy. Endre ny hamaloky ny endriny milaza ny nandraofana ny Basivava gazetiny, tamin’ny taona 1910. Teny kely foana no nifandonany tamin’ny « libre-penseur » tamin’ny fotoana izany. Ary ny fanenjehana azy tsy nianina mihitsy raha tsy niafara tamin’ny fanaovana sesitany azy tany Mayotte (1916) tao aorianana ny nanamelohana azy hanao asa an-terivozina ny taona 1915 tao figadrana Antanimora. Nony tafaverina anefa izy dia, mainka niditra lalina tamin’ny fanaovan-gazety ary namorona mihitsy ny Sakafontsaina tamin’ny 1926.
Diakona, Loholona ary Mpampianatra sekoly nikoizana ihany koa i Stella, ary tao amin’ny fiangonana LMS tao Ambohitantely izy no nanao izany asan’Andriamanitra izany. Anisan’ny Mpitoriteny malaza teo amin’ny sehatry ny Protestanta i Stella na tao Ambohitantely izany, na teto an-drenivohitra ka hatrany ambanivohitra. Izy no Stella na E. Andrianjafitrimo, mpanoratra, mpanao gazety, mpitolona VVS 1915, « Chef comptable » ny tsena rehetra teo Analakely ary mpamoron-kira. Fialambolin’i Stella ihany koa ny mitendry lokanga ary koa ny manao hosodoko. Nanambady an’i Ramatoa Rasoamanatena izay zafikelin’i Ratafika, rahalahin’i Radama I izy, ary niteraka valo mianadahy. Ireo taranany dia samy mpanoratra nandimby ny anaran-dray daholo. [Nosoratan’ny zanany lahiaivo Ch. Andrianjafitrimo tamin’ny fahaveloman’i Papà Stella. (Source: Nangonina tao anaty vatan’ny fianakaviana)]
Traduction française Andrianjafitrimo Edouard (Stella) (1881-1951)
Mis à jour le 2020/10/17